counseling.psychology.nepal April 16, 2020
डिसेम्वर, २०२० मा चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान शहरमा पहिलो पटक देखिएको भनिएको तथा जनवरी, २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरेको कोरना भाइरस Covid-19 आजको दिनसम्ममा आइपुग्दा विश्वभर महामारिको रुपमा देखापरिसकेको छ । यो भाइरसले विश्वका अल्पविकसित देशहरु सहित विकसित देशहरु पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । नेपाल समेत यस महामारिको उच्च जोखिमयूक्त देशको रुपमा रहेको छ ।
कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागी न्युनतम प्राथमिक उपायहरु अपनाउनु हरेक नागरिकको प्रथम दायित्व हुने गर्दछ । यसको लागि प्रत्येक व्यक्तिले आफनो सुस्वास्थ्य प्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी आफ्नो सुस्वास्थ्य प्रति ध्यान दिदा दिदै पनि, परिवारको आफ्नो मान्छे संग कुराकानी गर्दागदै पनि मनमा अनेक किसिमको संवेगहरु आउन सक्छन् । जस्तै:
· दिक्क लाग्ने
· झिंझो लाग्ने
· मनभारी हुने
· जिउ गलेको जस्तो हुने
· दुखी हुने
· चिन्ता लाग्नने
· रिस उठ्ने
· तनाव, अनावश्यक टेन्सन हुने
· डर लाग्ने
विश्व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको यस असामान्य परिस्थितिमा नागरिकमा यस्ता लक्षणहरु देखिनु स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । तथापी यस परिस्थितिबाट दैनिकरुपमा सृजना भएका यावत पक्षहरु जस्तै पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध, खानपिन, सुताई, दैनिक कृयाकलापहरु आदिमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ भने उक्त अवस्थामा हालको जटिल अवस्थामा Online Counseling मार्फत सेवा लिन उपयुक्त हुन्छ ।
हाल नेपाल सरकारले घोषाणा गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको वन्दावन्दी कहिले सम्म हुने हो यकिन गर्न गाह्रो छ । यस विषम परिस्थितिमा हामीले हाम्रो मानसिक सुस्वास्थ्य को लागि के गर्न सक्छौ त ? इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियो जस्ता विधुतिय सञ्चार माध्यमहरुबाट धेरै भन्दा धेरै जानकारीहरु प्राप्त भइरहेको छन् । धेरै कुराहरु सुन्दासुन्दै, वुझदा वुझदै पनि मन अस्थिर भएको हुन सक्छ । अझ विभिन्न समाचारहरु हेर्दा लाग्छ कि ज्वरो आएर मुत्यू भएपनि कोरोना होकी ? भन्ने आशंका हुने र शहर बजारका टोलहरुमा तथा गाँउघरहरुमा कोही विदेश वा बाहिरबाट आएको थाहा पाउने वित्तिकै एक्कासी डर लाग्ने र किन आएको होला भन्ने सोच हरेक व्यक्तिको मनमा आउने गर्दछ । यसरी आफु वरीपरिका हरेक कृयाकलापहरुबाट व्यक्तिको मन प्रभावित भइरहेको हुने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग निर्देशिकाका आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई अनुसरण गर्दै हालको विषम परिस्थितिबाट हरेक व्यक्तिको मनमा आएको विचलनलाई स्थिर गर्नको लागि विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ । यसको लागी पहिलो शर्तको रुपमा कोरोना भाइरस आयतित भाइरस भएको हुँदा हालसालै विदेशबाट नेपाल भित्रिएका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्यरुपमा तीनवटा कुरा पालना गर्न गराउनु पर्ने हुन्छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा सारा विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा यसप्रति नागरिकको डर र त्रासको कारण मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ` । यस परिस्थितिमा सामाजिक प्राणीको हैसियतले समाजमा एकले अर्कालाई हरसम्भव सहयोग गनु पर्ने मानविय दायित्व समेत हुन आउछ । मनोसामाजिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत यस प्रकारको सहयोग अपेक्षित छ । तसर्थ, समाजमा एकले अर्कालाई लाञ्छना लगाउने तथा विभेद गर्नाले हाम्रो समाजको सामिप्यता अधोगती तिर जानेछ र उक्त आघातबाट हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पक्कै पनि स्थिर हुन सक्दैन । सामाजिक अपहेलनाले संक्रमित नहुँदा नहुँदै पनि वैदेशिक यात्राबाट स्वदेश फर्किएका व्यक्तिहरुको दैनिक दिनचर्यामा आएको परिवर्तनले निन्द्रा नलाग्ने, डर लाग्ने, चिन्ता लाग्ने तथा उक्त व्यक्तिको आसपासमा बस्नेहरुमा समेत सोही प्रकारको समस्याहरु आउन सक्ने भएको हुँदा एकापट्टी कोरोना भाइरसको त्रास र अर्कोपट्टी बन्दाबन्दीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निम्त्याइ रहेका समस्याहरुले गर्दा मनोसामाजिक सहयोग अत्यावश्यक देखिन्छ ।
अतः मानसिक स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागी केही उपायहरुलाई प्रयोग गर्न उपयुक्त देखिन्छ । यस संकटको घडिमा नागरिकलाई प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहयोगमा हुने समन्वय र सुदृढीकरणका लागि अन्तरनिकाय आपतकालीन अवस्थाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग निर्देशिका (Inter Agency Standing Committee Guideline) बमोजिम मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गर्न उपयूक्त हुन सक्छ । यस निर्देशिकाले आपतकालिन स्थितिमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको लागि मूलभुतरुपमा तपशिल बमोजिम मार्ग निर्देशित गर्दछ ।
Look (हेर्ने): बाहिर वातावरणमा के भाको छ घरमा रहेर हेर्न सक्छौ‌ ताकि अवस्था के छ ? बुझन सक्छौ ।
Listen (सुन्ने): भरपर्दो तथा यथार्थपरक समाचार सुन्ने
Link (समन्वय गर्ने): हालको बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा सञ्चारका माध्यमहरु जस्तै: फोन, मोबाइल, इन्टरनेटको प्रयोग गरी संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी आफुलाई लागेका समस्याहरु बारे सोधखोज गर्नुका साथै सोको बारे जानकारी लिने र दिने प्रयोजनको लागि समन्वय आवश्यक हुने ।
यसका अतिरिक्त दैनिक व्यक्तिले आफनो दैनिक रुपमा भोगेका गरेका अनुभवहरुलाई सहज रुपमा सजगता पूर्वक निर्वाह गर्दै जाँदा हाल देखापरेको समस्याहरु केही हदसम्म न्यूनिकरण हुने देखिन्छ । साथै तल उल्लेखित कृयाकलापहरु गर्दा समेत मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा सहयोग हुने गर्दछ ।
तपाई आफु उदास भएको अवस्थामा एक्लै बस्न रुचाउनुहुन्छ होला । तर यसो गर्दा परिस्थिति अझै नराम्रो हुदै जानसक्छ । परिवार सँग समय बिताउने, एक अर्कोसँग कुराकानी गर्ने, ख्याल ठट्टा गर्ने र गीत सुन्ने ।
तपाईले गर्न छाड्नु भएका कामहरु पून शुरुवात गर्ने । जस्तैः लेखहरु लेख्ने, कथा कविताहरु लेख्ने ।
आरामदायी अभ्यासहरु गर्ने ।
लामो श्वासप्रश्वास अभ्यास गर्ने, ध्यान, योगा गर्ने ।
शारीरिक सरसफाई , खानपानमा विशेष ध्यान दिने र प्रशस्त आराम गर्ने ।
आफूमा भएको सकारात्मक कुराहरु (सीप, ज्ञान) आदि लाई सम्झने र उक्त सीप तथा ज्ञानहरुलाई क्रियाकलापको रुपमा प्रयोग गर्ने ।